Ny fifohazan’ny ‘indraimihira faharoanjatotaona’ ao Però · Global Voices teny Malagasy
Ny tanora no mihetsiketsika manohitra ny kolikolin'ny governemanta
MpanoratraAndrea Marcela Paliza Olivares
Voadika ny 02 Avrily 2021 8:04 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, English, Nederlands, русский, Español
Saripikan'i Andrés Huacaychuco Quijada, nahazoana alalana.
Manamarika ny fanombohan'ny herinandro manandanja indrindra nandritra ny 20 taona tao amin'ny firenena ny andron'ny 9 Novmbra 2020. Tamin'io andro io ny kongresy peroviana no nanapa-kevitra hanaisotra ny filohan'ny Repoblika Martín Vizcarra, rehefa vita ny adihevitra fohy nikasana hanamarinana ny hetsiny amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny tanjon'izany hetsika izany, izay nampirisihan'ny mpikambana ao amin'ny kongresy izay iharan'ny fanadihadiana heloka bevava iandraiketan-dry zareo ihany, dia ny hifeny ireo fahefana lehibe ao amin'ny Fanjakana: ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna, mba hanoherana fanitsiana na hanohanana fepetra manome vahana ny tombontsoan-dry zareo manokana. Ity ihany koa ny fotoana nitenenan'ny tanora ho an'ny firenena manontolo tamin'ny alalan'ny fivoahana ho eny an-dalambe.
Ny fanesorana Filoham-pirenena noho ny lesoka ara-maoraly, izay fehezin'ny Andininy faha-113 amin'ny Lalampanorenana Perovianina, dia fomba fifehezana nomena ny parlemanta ary novolavolaina hiarovana ny biraon'ny Filoham-pirenena, miantoka fa mifanaraka amin'ny toerana ametrahana azy tsara ny “maoraly” an'ilay olona hitazona izany toerana izany. Na izany aza, indrindra amin'izao fotoana izao, miteraka adihevitra ny votoatiny satria tsy mazava ny halaliny. Ary manampy izany, mety hiteraka fanonganam-panjakana miafina ny fampiasana azy an-jambany sy an-kifidifidy olona, araka ny nolazain'ilay mpahay lalampanorenana César Landa.
Zava-dehibe, anefa, ny manondro fa na dia tsirinkevitra tsy voafaritra mazava aza ny “tsy fahafahana ara-maoraly” [tsy fahaiza-miaina], dia tokony voafetra ao anatin'ny faritra nametrahan'ny Lalampanorenana azy ny fampiasana azy. Avy amin'izany, ho fanampin'ireo fombafomba ara-pitsarana efa napetraky ny Andininy 89-A amin'ny Fitsipiky ny Kongresy, izay mamelabelatra kokoa ny Andininy faha-113 amin'ny Lalampanorenana, ilaina noho izany ny manaja sy mikojakoja ireo zo mifandraika amin'ny fombafomba ilaina amin'izany, ary mba ho azon'ny saina ekena, voafatra araka ny tokony ho izy, ary misy fanjohin-kevitra ny fanapahan-kevitra.
Tsy nanaja ireo notinaky ireo anefa izay nitranga tamin'ny 9 novambra. Raha marina fa nanaovana famotorana amin'ny resa-kolikoly tamin'ny fotoana naha-governoram-paritra azy tao amin'ny departemantan'i Moquegua i Vizcarra, dia mbola ao amin'ny fanangonam-porofo aloha izao no dingana hamaritana raha hisy na tsia ny raharaha mety hitsarana azy. Nampiasaina ny tati-baovaon'ny gazety amin'ilay raharaha hanesorana ny Filoha tsy misy fanamarinam-baovao sy famotorana ary tsy mbola nohenoina akory izay fiarovan-tenany.
Ankoatra izay, tsy vonona ho amin'izany ihany koa ny zavamisy eo anivom-piarahamonina. Iray amin'ireo firenena tena nizaka ny mafy indrindra noho ny COVID-19 i Però, na izany amin'ny raharaham-pahasalamana na ara-toekarena. Manampy trotraka izany krizy ara-politika izany ihany koa ny faharendrehan'ny hopitaly sy ny fahantran'ny olompirenena bebe kokoa, vokatry ny fifanandrinan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna amin'ity raharaha ity, ary efa manatomotra indrindra ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemnatera ny firenena. Izany fahafohezan'ny fotoana izany—valo volana—mandra-pandraisan'ny solontenam-bahoaka vaovao ny toerany, no hmahatonga ny olom-pirenena sasantsasany mahatsapa fa ny endrika tsara indrindra dia ny hamelana an'i Vizcarra hamita ny fehim-potoana iasany na dia hadihadian'ny biraon'ny fampanoavana aza izy. Raha ny marina, fitsapan-kevitra iray notanterahana tamin'ny taona 2020 notarihan'ny Ivotoeram-Pikarohana Perovianina (IEP) no nampiseho fa 95 isan-jato amin'ny namaly no manaiky izay endrika izany ary 4 isan-jato monja no mirona mankany amin'ny fanesorana ny filoha.
Raha izay moa no mitranga, ny hery manosika ny mpanao lalàna hanaisotra an'i Vizcarra dia ny hampankatoavana fepetra manome vahana azy ireo. Sakana ny governemanta amin'ny fankatoavana lalàna mampiady hevitra izay, amin'ny ankamaroan'ny tranga, novolavolain'ny sampana teknika ao amin'ny mpanatanteraka. Ohatra, ny ampitson'ny fanesorana, nisy volavolan-dalàna iray mandrahona an'i Amazonia amin'ny fampiroboroboana ny fitrandrahana sehatra asa-tanana [artizanaly] iray sy tolo-dalàna iray hafa, izay natao hanamorana kokoa ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana naroso ho ankatoavina. Ny andro manaraka izany ihany koa, namolavola lalàna ny vaomieran'ny fanabeazana ny hanafoana na hanitsy fanabeazana ambaratonga faharoa sy ambaratonga ambony. Nataony ho fialantsiny ny hamehana ara-panabeazana nateraky ny valan'aretina COVID-19, notadiavin-dry zareo ny hankatoa lalàna maharitra ahafahana manapaka fanitsiana ara-pampianarana sy fanabeazana, ka haharatsy toerana ny fizotran-draharaha rehetra natao hiantohana fanabeazana avo lenta eo amin'ny fanabeazana fototra sy ambaratonga ambony kokoa. Amin'ny ankapobeny ihany koa dia tandindonin-doza ny rafi-pampianarana.
Niteraka fahatezerana ho an'ny Perovianina an'arivony, indrindra fa ireo tanora sy zatovo izay nanatontosa hetsi-panoherana goavana nandritra ny herinandron'ny 9-17 novambra ho fiarovana ny demaokrasia sy ny fanaovaozana lehibe nataon'ny fanjakana (fanabeazana, politika ary raharaham-pitsarana), izany hetsika rehetra izany, izay niatomboka tamin'ny fankatoavana ny fanesorana an'i Vizcarra. Na dia notontosaina tamim-pilaminana aza ireny fihetsiketsehana ireny, dia nanaovan'ny polisy nasionaly perovianina famoretana tamin-kerisetra tamin'ny 14 novambra 2020 izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny tanora anankiroa, Inti Sotelo Camargo sy Jack Brian Pintado Sánchez, ary maro hafa no naratra mafy. Ho fanampin'ny fanapahan-kevitra ratsy nataon'ny Kongresy, dia nisandratra ihany koa ny governemanta tsirefesimandidy, saingy enina andro monja no naharetan'izany noho ny fihetsiketsehana an-dalambe, na dia niteraka ratra lalina aza ny nataon'izany governemanta naharitra vetivety izany.
Farany, nahatsiaro repotra ny sarangan'ireo politisianina nifandona tamin'ireo tanora sy zatovo. Nidina an-dalambe hiaro ny tanindrazany ireo “indraimihiran'ny faharoanjatotaona,” voambolana iray novolavolain'ilay Perovianina sosiology Noelia Chávez, sy ireo vavolombelona manatri-maso ireo kolikoly ataon'ny mpiasam-panjakana. Hitan'ity taranaka ity ny fifandrombahan'ny politisianina ny firenena ho toy ny hazan-dry zareo. Nanamarika ihany koa ity taranaka ity fa mihalalina ny hantsana (eo amin'ny fiaraha-monina) ary tsy hita hosamborina ny rariny. Tsy avelan'ny tanora mandalo foana izany rehetra izany, te-hanana firenena tsara kokoa ry zareo ary avy amin'izany, mampiasa fomba fiteny vaovao ry zareo sy sehatra vaovao tahaka ny Instagram na Tik Tok ifampizarana torohay, hiomanana, ary hanehoany ny ahiahiny sy ny zava-manahirana an-dry zareo.
Koa aza taitaitra raha misy ny resaka lalampanorenana vaovao. Tena ilaina indrindra ny adihevitra satria efa niova tsy mitovy ny tamin'ny taona 1993, izay nampiharan'ny filoha ny lalampanorenana ankehitriny ny firafitry ny fiarahamonina sy ny tokotanim-piarahamonina amin'izao fotoana izao. Mety ilaina ny fanavaozana, sy ny dinam-piarahamonina vaovao aza angamba, saingy voalohany, tsy maintsy mifampihaino sy mifanaja isika, ary mamaritra izay mitarika hankany amin'io dingana vaovao io. Hankalaza ny faharoanjato taona ny fahaleovantena isika amin'ny faha-28 ny volana jolay amin'ity taona ity, na sia tsy fantatsika tsara aza hoe iza isika. Angamba fotoana izao hananganana hoavy vaovao mampiaty ny rehetra.
19 Marsa 2021Amerika Latina